कसरी वजन कम गर्ने सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
अतिरिक्त पाउन्ड एक आधुनिक समस्या हो जसले विश्वको अधिकांश जनसंख्यालाई असर गर्दछ। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं यस समस्याबाट मुक्त हुन कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ, यो उनीहरूको बारेमा हो जुन यस लेखमा छलफल गरिने छ।
अधिक तौल एक कुरूप उपस्थिति मात्र हो, तर समग्र स्वास्थ्यको लागि नकरात्मक परिणामहरू पनि। एक व्यक्तिमा अधिक वजनको साथ, पाचन पथ, मुटु, मिर्गौला र अन्य आन्तरिक अंगहरूको काममा अवरोध हुन सक्छ।
त्यहाँ प्राय जसो केसहरू हुन्छन् जब व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य शुरू गर्दछ, मोटोपना प्राप्त गर्दछ, र यसको परिणाम स्वरूप माध्यमिक रोगहरू विकास हुन्छन् जसले विनाशकारी परिणाम निम्त्याउँछन्।
त्यसकारण यो आवश्यक छ कि उचित र स्वस्थ पोषणको सिद्धान्तहरूको पालना गर्न, साथ साथै तपाईंको तौल र स्वास्थ्यको अनुगमन गर्नुहोस्।
कसरी अधिक वजन को उपस्थिति रोक्न?
अतिरिक्त पाउन्डसँग संघर्ष गर्न नदिनको लागि, यसलाई "प्राप्त" गर्नु उत्तम हुँदैन, र यसको लागि तपाइँ केवल केहि सुझाव र नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ।
अधिक वजनको उपस्थिति रोक्न तपाईंलाई आवश्यक छ:
उचित पोषण सिद्धान्तहरूको अवलोकन गर्नुहोस्;
शरीरलाई पर्याप्त पानी प्रदान गर्नुहोस्;
हानिकारक खाना खानु हुँदैन;
यी सबै सुझावहरू अनुसरण गर्न पर्याप्त सजिलो छ, किनकि तिनीहरूलाई धेरै प्रयास, समय र कम पैसाको आवश्यक पर्दैन।
स्वस्थ खाना खाएर र खेलकुदमा जानका लागि, एक व्यक्तिले आफ्नो शरीरलाई राम्रो स्थितिमा राख्दैन, तर यसले उसको स्वास्थ्य र समग्र कल्याणमा पनि उल्लेखनीय सुधार गर्दछ।
स्वास्थ्यलाई हानी नगरी कसरी वजन कम गर्ने?
यदि, तथापि, त्यहाँ अधिक वजनको साथ समस्याहरू छन्, त्यसोभए यहाँ एक पेशेवर दृष्टिकोण र धैर्य पहिले नै आवश्यक हुनेछ।
सबैभन्दा पहिले, तपाईंले फ्राइड खाना, संरक्षक, सुविधायुक्त खाद्य पदार्थ, कार्बोनेटेड पेय र रक्सी त्याग्नु पर्ने हुन्छ - यी उत्पादनहरू शरीरको लागि हानिकारक हुन्छन्।
शरीरलाई पर्याप्त मात्रामा तरल पदार्थ चाहिन्छ - शुद्ध पानी, कफि होइन, जुस र अन्य पेय, अर्थात् शुद्ध पानी।
प्रति दिन पानीको लगभग दैनिक मापदण्ड २- liters लिटर हो, तर यो सबै व्यक्तिको वजनमा निर्भर गर्दछ।
अधिक तौलबाट छुटकारा पाउन, तपाईंले थकित आहारहरूको पालना गर्नुपर्दैन, भोकभोकै बस्नुपर्दछ र केही दिन खेल हलहरूमा बस्नु पर्दैन।
तपाईंले केवल केही साधारण सल्लाहहरूको पालना गर्नुपर्दछ जसले केवल वजन कम गर्न, तर स्वास्थ्य र शरीरलाई स्वरमा ल्याउँदछ, यसको लागि तपाईंलाई आवश्यक छ:
१. उचित पोषण तपाईको साप्ताहिक डाइटमा समावेश गर्नु अत्यावश्यक छ: ताजा तरकारी र फलफूल (मूली, केरा, टमाटर, काँक्रा, खुर्सानी र त्यस्तै अरू), उमालेको मासु, अण्डा, प्राकृतिक मसला, दुग्ध र खट्टा-दुग्ध उत्पाद, अनाज, समुद्री खाना, माछा, आलु र साग ।
२. अनुपातिक खाना खान दिनको small पटक साना भागहरूमा हुनुपर्दछ, बढि खानु निषेध गरिएको छ।
यदि खानाको बीचमा भोकको अपूरणीय भावना उत्पन्न भयो भने, तपाईं स्याउ, कम चिल्लो दही वा केरा खाएर एउटा सानो स्नैक्स बनाउन सक्नुहुन्छ।
Active. सक्रिय जीवनशैली। तौल घटाउन, तपाईलाई कडा डाइटको आवश्यक पर्दैन, तर सक्रिय खेलहरू प्रभावकारी र सबै भन्दा उचित तौल घटाउनको लागि एक अनिवार्य कम्पोनेन्ट हुन्।
यो अपोइन्टमेन्ट गर्न आवश्यक छैन, पार्कमा हिंड्न, सुत्ने अघि र निद्रा पछि व्यायाम गर्नुका साथै स्क्वाट र साधारण शक्ति तत्वहरू प्रदर्शन गर्न पर्याप्त हुन्छ।
उदाहरणका लागि, भुइँबाट पुश-अपहरू, तेर्सो बार र बारहरूमा व्यायाम, जिम्नास्टिक बल र जम्पि r रस्सीमा व्यायाम अतिरिक्त पाउन्डबाट छुटकारा पाउन, शरीरलाई टोनमा ल्याउन, र मांसपेशिहरूलाई एक आराम र आकार दिन योग्य छन्।
सख्त आहार र भोकमरी पछ्याउने मात्र होइन, तर यो खतरनाक पनि छ, किनकि यसले प्राय जसो बढी दयनीय अवस्था निम्त्याउँछ। त्यसकारण, तपाईले बढि वजनको बिरूद्ध लडाईमा बिस्तारै र सहि मुद्दामा कुरा गर्न आवश्यक छ।
आजको लेखको सल्लाह पालन गर्दै, एक व्यक्ति सजिलैसँग अतिरिक्त पाउन्डबाट छुटकारा पाउन सक्दछ, आफ्नो शरीरलाई टोनमा ल्याउन सक्छ, र स्वास्थ्यलाई सामान्यमा फिर्ता लिन।
कसरी 10 किलो वजन अधिक छिटो गुमाउने?
कुन खाना हातमा बोसोमा जान्छ र हातमा बोसोबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ? अग्रिम धन्यवाद
Buckwheat आहार, तपाइँको अनुभव र समीक्षा? अधिकतम वजन घटाउने र आहार समय?
वजन को लागी गोलीहरु। सामान्यतया, औषधि फार्मेसीमा किन्न सकिने गोलीहरू?
54 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,349 प्रश्नहरू।